Salman Khan Oo Si Ku Tala Gal Ah Uga Soo Daahay Xafladii Aroos Ee Bipasha Si Aysan Isku Arkin Aishwarya Iyo Ranbir - iftineducation.com
Salman Khan Oo Si Ku Tala Gal Ah Uga Soo Daahay Xafladii Aroos Ee Bipasha Si Aysan Isku Arkin Aishwarya Iyo Ranbir
iftineducation.com –Xaflaad aroos oo aysan Bollywood-ka u kala harin ayay dhigteen lamaana is doorteen Bipasha Basu iyo Karan Singh Grover.
Hadaba waxaa haatan la sheegay in xafladan ay isugu imaadeen shaqsiyaadka Bollywood-ka ugu awooda badan in sheeko xiiso badan meesha ka dhacday.
Wax kale ma ahan in Mega Star Salman Khan uu xafladan xili dambe soo gaaray asigoo arinkaas la sheegay inuu si ku tala gal ah u sameeyay si aysan isku arkin Aishwarya Rai Bachchan iyo Ranbir Kapoor.
Dabcan waa macquul in jadwalka martida xiliga ay imaaneesay si qurxoon ay u diyaariyeen Bipasha iyo Karan si xafladooda jawigeeda wacan isku badalin.
Sidaa darteed Aishwarya Rai Bachchan, seygeeda Abhishek Bachchan iyo sodageeda Amitabh Bachchan xalay 10:00 habeenimo xiliga Hindiya ayay xafladii aroos ee Bipasha aamiideen waxayna goobta isaga tageen markii ay nus saac ka badan joogeen.
Sidoo kale Ranbir Kapoor isaga qoyska reer Bachchan wuu kasoo horeeyay xili dambe ayuu yimid wuxuuna goobta isaga tagay markii uu waqti ku filan xafladii aroos joogay.
Hadaba Mega Star Salman Khan ayaa xili dambe yimid dabcan markii Aishwarya Rai Bachchan iyo Ranbir Kapoor goobta isaga tageen ayuu iska soo aadiyay.
Salman iyo Aish xiriir jeceyl ayaa hada ka hor dhex maray balse sanadii 2002 si xumaato ku dheehan ayay ku kala tageen wixii markaas ka dambeey labadan shaqsi marnaba islama hadlin sidoo kalena qof walbo qofka kale meesha uu joogo wuu ka fogaadaa si saxaafada aysan sawir uga wada qaadin.
Sidoo kale Salman iyo Ranbir xiriir wanaagsan kama dhaxeeyo mana isla hadlaan waayo Ranbir wuxuu saaxiib la noqday Salman saaxiibtiisii hore Katrina Kaif.
Sidaa darteed Salman balankii uu ka qaaday Bipasha oo ahayd inuu arooskeeda imaado wuu kasoo baxay Bipasha iyadana jadwal wacan ayay martidii qaaska u ahayd u sameesay si Salman, Aish iyo Ranbir aysan isku arkin!!!! – muuqaalka aad hoos ka daawan karto ayaana laga duubay.
Salman with Bipasha & Karan at their wedding reception ✨
A video posted by Salman Khan Fan Page 💕 (@salmankhanloverz) on Apr 30, 2016 at 3:21pm PDT